मादक पदार्थ होइन वियर, यो एक अचुक औषधि पनि हो ? जान्नुहोस् वियरका १२ लाभ - हिपमत
तपाई वियर कत्तिको पिउनुहुन्छ ? यदि वियर पिउनुहुन्छ भने तपाईलाई फाइदा गर्छ । नेपाली संस्कृतिमा वियर पिउनुलाई राम्रो मानिदैन । बियरलाई मादक पदार्थका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । यदि पिउनु हुन्न भनेपनि तपाइँलाई वियर खाँदा यति धरै फाइदा छन् भन्ने थाहा पाउँदा आश्चर्य लाग्न सक्छ । विश्वभर पिइने वियरका बारेमा अमेरिकामा हालै गरिएको एक अध्ययनले वियर विउने मानिसलाई मृगौलाको पत्थरी हुने खतरा नखानेको तुलनामा निक्कै कम हुन्छ । बियर पिउनु वा नपिउनु तपाईंको इच्छामा निर्भर हुन्छ । तर, पछील्लो समय वियरको प्रयोग निकै हुने गरेको छ । वियर पिउनु हुन्न भने तपाइलाई वियर खाँदा यति धरै फाइदा छन् भन्दा अनौठो लाग्ला । अमेरिकामा हालै गरिएको एक अध्यनले वियर पिउने मानिसलाई मृगौलाको पत्थरी हुने खतरा , नखानेको तुलनामा निक्कै कम हुन्छ भन्ने पत्ता लगाएको छ । थोरै मात्रामा वियर पिउनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । अल्कोहलको मात्रा बढी हुँदा स्वास्थ्यमा खरावी हुने कुरा सबैलाई थाहा छ । तर ठिक्क मात्रामा वियर पिउँदा भने स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने नयाँ अध्यनले देखाएको छ । वियर नियमित पिउँदा शरीरमा पानीको कमी हुने खतरा हुँदैन । अअमेरिकामा हालै गरिएको एक अध्यनले वियर पिउने मानिसलाई मृगौलाको पत्थरी हुने खतरा , नखानेको तुलनामा निक्कै कम हुन्छ भन्ने पत्ता लगाएको छ ।